Amin'ny ankapobeny, ny akanjo misy dantelina sy dantelina dia marefo sy marefo kokoa, ary ho sahirana kokoa rehefa manasa. Tandremo ny toerana maro, dia ho voarangotra izany raha tsy mitandrina ianao. Hainao ve ny manasa lamba dantelina no mety? Avelao aho hampahafantatra anao ny t ...
Karazan-damba inona no atao amin'ny dantelina? Fanadihadiana lehibe amin'ny lamba dantelina dimy
Ny lace dia ampiasaina ho fitaovana fanampiana amin'ny akanjo. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia mino fa ny dantelina dia ny dantelina eo anilan'ireo akanjo fotsiny. Raha ny marina, ny dantelina dia lamba aorian'ny amboradara. Raha mbola voaravaka ny lamba, dia azo isaina ho dantelina, ary avy eo amboradara ho kofehy, ary ny firafitr'ireo ...